Malaamalttummaan qarshii miiliiyona 80tti tiilmaamamuu raawatamuusaa koomishiniin farra malaamalttuummaa beeksiisee. - ዜና ከምንጩ
Koomishiniin naamuusaafii farra malaamalttummaa yakkawwan malaamalttummaa heddu argadheera jachuunsaa ibsameera.
Yakkawwan malaamalttummaa kanaan kan argaman qarshii miliyona 67fi kuuma 642fi635 akkasuumas konkoolaataa lama akkasuumas lafa kaaree Kuma 521fii 415 dhoorkuusaa beeksiiseera.
Kanatti dabalees qarshii Kuma 16fi Kuma 927fi 889 lafa kaaree meetra 640 motummaaf galchuusaa ibseera.
Hojjiwwan yakka malaamalttummaa ilaalchisee ragaa abbaa alangaa walii galaafii poolisiidhaan dhufeen qarshii miliyona 22fi Kuma 643fi986 akasumas iddo kaaree meetra 216 qamadii kuntaala5fii manni jireenyaa villas 11 dhoorkamuunsaa beekameera.kanatti dabalees qarshii miliyona 40kuma 762fi 853 lafa kaaree meetra 6601 qorqqorroo 685 miismaara paaketti 3 fii laaptoppi 5 motummaaf deebi’uusaa koomishii ibsa Addis maaladaafi eergeen beeksiiseera.
Malaamalttummaa ittisuudhaaf hojji hojjatamuu kessaa eeruu kennuu ta’uunsaa kan beekamu yammu ta’u kanaaniis eeruuwwan109 gaha’anii seeraan akka ilaalaman taasiisuun danda’amuusaa komishiniichii beeksiiseera.
Kanenen kessaa tokko eeruuwan 71ta ‘an baliinaan ilaalamanii qorannaa dabalataaf komishinoota federaalaa finfinneefii dirredawaaf kan ergaman yammu ta’u dhiimooleen 9 immoo abbaa alangaa naannolee oromiyaa amaraafii naanno kibbaaf dabarfamaniiru jadhameeta.
Dabalataaniis lamman isaanii iuyannaa ta’anii argamuusaaniitiin polisii fadaraalaafii abbaa alangaa walii galaa fadaraalaaf dhimmoleen lama akkaataa murtii murtaa’en karaa ittisa yakka malaamalttummaa akka hojjataman karaa daayitektooreetii ittisa malaamalttummaa dhimmii tokkommo akkaataa murtii murtaa’en dhaabatiichii qulqullesse akka ibsuu gara dhaabbata abagar itiyophiiyaa Fi eergamuunsaanii ibsameera
Karaa koonveenshionii farra malaamalttummaa idiil adunyaa kan geggefamuu qabeenyaa saamamee deebisiisuuf ragaaleefii haalawan dursaa adeemsifamee geggesuudhaamf haalii dursaa hundiii huunatameera
Akkataa hojii kuutaa horddofii yakkawwan malaamalttummaa ragaa foyyeesuudhaaf bahee hojiira akka jiruu komishiniichii beeksiiseera
Qajeelfamnii kuun ragaa waliigalaa kuutaalee horddofii qabuudhaaf waqtawaa taasiisuuf yamm ta’u ragaa waajiraalee Dhaaubbileen misoomaa 599 gurmmessu danda’uusaa komishiniichii eereera.
Kanneem kessaa kuutaalee horddofiifii Kuma 4fii 667 guurmeessuun danda’amuusaa komishiniichii gabaasasaatiin eereera.
Komishiniichii hojji hojjatee kessaa galmee qabeenyaa yamu ta’u filatamttonni muudamttonni motummaa hojjattonni motummaa hojjattonni Dhaabbileen misoomaa qabeenyaasaanii akka galmeessisan taasiisuun waliigalatti sadarkaa gutuu biyyaatti qabeenyaa Namoota miiliiyona 1.5fii Kuma 31fii 57 galmeesiisuu danda’u beekameera.
Akka gabaasa komishiniichastti yoo ta’e Akkataa daangaa yaroo seeraan kaawameen hoganttonnifii hojjattonni motummaa hi galmeesifne kuma 3f 335 tokko tokko isaanii qarshii Kuma tokko tokko adabamanii kanaaniis qarshiin miliiyoona 3fi Kuma 335 motummaaf galii ta’u beekameera.
Ragaalee galmeesiiftoota qabeenyaa 620 sirri ta’uusaa mirkanessuudhaaf bu’a argamee iratti tarkaanfiiwwan fudhachiisuuf karoorfamee kan galmessistoota 346 qulqula’e kurnnan isaanii iratti garaa garummaan ragaa ola’anaa argamuusaafii kanaaniis hojjiin qorannoofoi hiimataa akka geggefamuu ragaan barbaachiisaa qindaa’e polisii fadaraalaafii abbaa alangaa walii galaatti eergamuusaa Addis maaladaan gabaasuunshee nii yaadatama.
Total views : 7504771